तुलसी स्वास्थ्यमा बहुउपयोगी औषधी ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	तुलसी स्वास्थ्यमा बहुउपयोगी औषधी ! » Nepal Fusion
तुलसी स्वास्थ्यमा बहुउपयोगी औषधी !
तुलसीका पाँच प्रजाति भए पनि सेतो र कालो तुलसी प्रायः सर्वत्र पाइन्छ । यी दुई प्रजाति स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छन् । वनस्पति विज्ञ डा। खेम भट्टराई तुलसीमा ‘एन्टीअक्सिडेन्ट’ नामक तत्व पाइने र यसले शरीरभित्र खानपान र प्रदूषणबाट उत्पन्न विकारलाई नष्ट पार्ने बताउँछन् ।
यसको उपयोगले पाचनक्रिया सक्रिय पार्ने, भोक जगाउने, झाडाबान्ता रोक्ने काम गर्छ । तुलसीको पत्ता र जिरा पिसेर दिनमा तीन–चार पटक खाँदा पखाला रोकिन्छ । “अजीर्ण, अरुचि जस्ता सामान्य समस्यादेखि मुटु, मिर्गौला, कलेजो जस्ता जटिल समस्यामा तुलसी उपयोगी हुन्छ”, डा। भट्टराई भन्छन् । उनका अनुसार तुलसीको पात सेवनले कलेजोको कार्यक्षमता बढाउँछ ।
तुलसीका यिनै बहुआयामिक फाइदाका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनमा तुलसीको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।